အသောကရာဇာ ဆွမ်းလောင်းအသင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အသောကရာဇာ ဆွမ်းလောင်းအသင်း
Posted by thihayarzar on Jun 26, 2011 in News |9comments
ကျောက်ဆည်မြို့မှာပထမဦးဆုံး လူငယ်လေးများ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ဆွမ်းလောင်းအသင်းလေးပါ …… ဆွမ်းလောင်းအသင်းကိုစတင်တည်ထောင်စဉ်က လူငယ်လေး ( ၁၀ )ယောက် ဖြင့်မတည် တည်ထောင်ပြီး အခုဆိုလျှင် အဖွဲ့ဝင်လူငယ်လေးများ ( ၅၃)ယောက်တောင်ရှိနေပါပြီ … အသောကရာဇာဆွမ်းလောင်းအသင်းဟာ လပြည့်၊လကွယ်နေ့တိုင်း သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များကို ဆွမ်းလောင်းလှူပါသည် ….အခုဆိုလျှင် (၁၀ )ကြိမ်မြောက် ရှိပါပြီ …. ကနဦးအစမှာ ဘုန်းကြီးနှင့်ကိုရင်များ အပါး (၃၀)လောက်သာကြွရောက်အလှူခံပါတယ် … အခုဆိုလျှင် ဘုန်းကြီး နှင့် ကိုရင်လေးများ အပါး (၂၀၀)ကျော် ကြွရောက်အလှူခံပါတယ်ဟုသိရပါတယ် … အသင်းမှာ အသက် ( ၂၀ ) အရွယ်လူငယ်လေးများနှင့်အသက်(၁၅) နှစ်အရွယ်လူငယ်လေးများသာဖြစ်ပါတယ် ..အသင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ သာသနာ့တော်ကြီးအား အဓွန့်တည်တံခိုင်မြဲအောင် ဆောင်ရွက်နေကြသော ရဟန်းသံဃာတော်များအား ပစ္စည်းလေးပါး အထောက်အပံ ရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး ရပ်ကွက်နှင့် မြို့နယ်အတွင်းရှိလူငယ်လေးများ သာသနာ့တော်ကို ပိုမိုယုံကြည်သက်ဝင်လာပြီး သာသနာ့ပြုသူရဲကောင်းလေးများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည် …
အသောကရာဇာဆွမ်းလောင်းအသင်းရှိလူငယ်လေးများဟာ ရပ်ကွက်အတွင်းတွင် လူမှုကူညီမှုများနှင့် ပရဟိတ လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေကြပါသည် … ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ လမ်းမီးတိုင်များတွင် မီးသီးများတပ်ဆင်ခြင်း ရေမြောင်းဖောက်ပေးခြင်း လမ်းပြင်ခြင်း နှင့် တစ်ခြားလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေကြပါသည် ….အခုဆိုလျှင် ကျောက်ဆည်မြို့မှ ရေကြီးနေသော ရပ်ကွက်များတွင် ထမင်းထုပ်များကို ရေများထဲထိ တစ်နေကုန်လိုက်လံဝေဌပေးနေပါတယ် …. ရေတွေကလည်း လူမြုပ်တဲ့အထိကို နစ်တဲ့နေရာများကို ဖောင်များ ကျွက်များဖြင့် ဝေဌပေးနေပါတယ် …. စေတနာ့ရှင်များကလည်း ဆွမ်းလောင်းအသင်းတည်နေရာသို့လာရောက်ပြီး ရေဘေးကယ်ဆယ်ရန်နှင့် ထမင်းထုပ်များ ဝေဌနိုင်ရန် ဆန်၊ဆီ၊ဆား၊ကြက်သွန် ပိုက်ဆံ အစရှိသည်တို့ကို လာရောက်လှူဒါန်ြး ကပါသည် … သာသနာ့တော်ကြီးအတွက် အခုလိုလူငယ်လေးများ အများအပြားပေါ်ပေါက်လာတာအရမ်းကောင်းပါတယ် … အားလည်းအားပေးပါတယ် … ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်လှူဒါန်းချင်ပါသေးတယ် … သာသနာ့တော်ကြီး အဓွန့်ရှည် တည်တံ ခိုင်မြဲပါစေ ….
သိကြားသာသနာ မှာ သိကြားမင်းဦးမာဃ လမ်းစဉ်အတိုင်း ကောင်းမှုကောင်းကျိုးပြုနေကြသူများ ပါပဲ ။ သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျာ ။
တက်ကြွတဲ့ လူငယ်တွေ စုပေါင်းပြီး လုပ်တာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။
တခြား ဘာသာဝင်တွေမှာ ဆိုရင် အချိန်မှန် ဘာသာရေး ဘုရားရှိခိုးကျောင်း သီးသန့် အချိန်ပေးသွား ရတဲ့ အတွက် စည်းလုံးညီညွတ်မှု နဲ့ အချင်းချင်း နားလည်မှု ရှိကြတယ်။ အမြဲအဆက်အသွယ်လည်း ရှိကြတယ်။ ဗုဒ္ဗဘာသာဝင်တွေသာ တစုတစည်းတည်းလုပ်ဆောင်မှု အရမ်း အားနည်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ စုစည်း လုပ်နိုင်တာတွေ များလာရင်တော့ သိပ်ကောင်းပါတယ်။
သာဓု သာဓု သာဓု… ခေါ်ပါတယ်။
အသင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ သာသနာ့တော်ကြီးအား အဓွန့်တည်တံခိုင်မြဲအောင် ဆောင်ရွက်နေကြသော ရဟန်းသံဃာတော်များအား ပစ္စည်းလေးပါး အထောက်အပံ ရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ချက် ဟာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ …သာသနာ့တော်ကြီး အဓွန့်ရှည် တည်တံ ခိုင်မြဲပါစေ ….
သာဓု သာဓုသာဓု ပါ လူငယ်များ
၀မ်းသာကြည်နူး မိပါတယ် ….. အခုလိုလူငယ်လေးတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိရင် သာသနာ့တော်ကြီးအတွက် ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး …. ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့်သူတွေဖြစ်ကြပါစေ …. အသောကရာဇာဆွမ်းလောင်း အသင်း အဓွန့်ရှည် တည်တံခိုင်မြဲပါစေ … ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်တို့နေရာတို့ကိုလည်း ရရင်ဖော်ပြပေးပါမည် ….
ဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင်မဲ့ လိပ်စာများရှိရင် သိပါရစေဗျာ…. ပါဝင်ဒါနပြုနိုင်အောင်အကျိုးဆောင်ပေးစေလိုပါတယ်
ဆွမ်းလောင်းအသင်းကို ဆက်သွယ်လှူဒါန်းချင်ရင်ဖြင့် 06650653၊092051206၊0943100242 တို့ဖြစ်ပါတယ် … လေ့လာရင်းနဲ့လှူချင်ရင်တော့ ကျောက်ဆည်မြို့ ဖောင်ရွာ၊ရွာသစ်ရပ်ကွက် ဝေဘူလမ်း ရှင်ပင်အေးမြဘုရား ၊ အသောကရာဇာ ဆွမ်းလောင်းအသင်း ဖြစ်ပါတယ် ….. ဒီလိုသာသနာပြု လုပ်ငန်းတွေကို အားပေးပါတယ် ကြိုဆိုပါတယ် … နောက်ထပ်လည်း အားကျပြီးပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ် ……